Boqolal Qoys oo Laga Raray Xerada Qoxootiga ee Harti-Sheekh – Rasaasa News
Boqolal Qoys oo Laga Raray Xerada Qoxootiga ee Harti-Sheekh
Dec 6, 2011 Boqolal Qoys oo Laga Raray Xerada Qoxootiga ee Harti-Sheekh, ethiopia, qaxooti, Somali
Harti-sheekh, November 6, 2011 [ras] – wararka ka imanaya degmada Harti-sheekh ee gabalka Jijiga, ayaa sheegaya in boqolaal qoys oo ka mid ah dadka degan xerada qaxootiga ee Harti-sheekh laga raray. Dadkani waxay xeradan daganaayee 15 sano oo xidhiidh, waxayna ka samaysteen hoy iyo meherado shaqo, caruurtuna wax ugu baran jireen.
Rarida dadkan waxaa ka dambaysa baa la leeyahay dawlada degaanka Somalida Ethiopia. Ma cada sababta ay dawladu u rarayso kaliya, dadka u dhashay gabalada fog fog ee ugu dib dhacsan degaanka Somalida Ethiopia, maadaama ayna jirin qorshe guud oo lagu rarayo dadka degan xerada Harti-sheekh.
Degmada Harti-sheekh, ayaa hoy u ah kumanaan qaxooti ah oo ka yimid dalka Somaliya iyo tira yar oo ka timid gabalada degaanka Somalida Ethiopia.
Sida laga soo xigtay TV-Somalida ee dalka Ethiopia, dadkan ayaa dib u dajin loogu sameeyey degaanadii ay hore uga yimaadeen, iyaga ay iska kaashadeen celintooda UN-ta iyo Booliska degaanka Somalida.
Dadkan ayaa lagu qaaday baabuur waaweyn iyaga oo aan wadan wax jiscin ah. Waxaana la sheegay in booliska degaanku ay gacan siinayeen dadka. Kolkii ay gaadheen tuulooyinkoodii, waxaa la siiyey jiingado iyo alwaaxay ay ku dhistaan meel ay galaan, ka dibna waxaa la siinayaa baa la sheegay 20 neef oo adhi ah [oo u dhigantan cel celicelis ahaan qoyskiiba 5,000 birr].
Dawlada dhexe Ethiopia, ayaa baryahan dambe waxay waday qorshe ay dib u dajin ugu samaynayso 50,000 qoys oo Somali ah, sida ay sheegtay. Dawladu waxay sheegtay in ay dadka u abuuri doonto nolol ka wanaagsan nolosha ay ku jiraan haatan, iyada oo dajin doonta dhul beero ah. Waxaana loo diyaarinayaa rugo caafimaad, iskuulo iyo wax alaale wixii la xidhiidha noloshooda, sida ay dawladu sheegtay.
Waxaa hadaba isweydiin leh, waa maxay sababta ay dawladu dib baadiyaha u dajinayso dad mudo  shan iyo toban sano ah deganaa magaalo haystayna nolol magaalo caruurtuna wax u baranaysay. Tuulooyinka dadka qaarkiis la geeyey ayaan lahayn iskuul, biyo iyo caafimaad midna.
Sida ay wararku sheegayaan, dadkan ayaa waxaa ka mid ah meelaha la geeyey Tuulada Goomaar iyo tuulada Gari-go,an oo ka tirsan degmada Shaygosh ee gabalka Qoraxeey.
Waxaa kale oo ka mid ah meelaha dadkan la dejiyey degmada Fiiq iyo degmada Malayko oo ka tirsan gabalka Fiiq.
Sharciga dib u dajinta ee caalamiga ah, ayaa ah in dadka ay UN-tu gacanta ku hayso dib loogu celin karo degaankooda kaliya kolka looga sameeyo nolol la mid ah mida uu ku haysto meesha uu degan yahay.
Abdiweli Mohamed Ali: ‘Ready to move on’
Madaxweyne Sayid Cabdi oo Saraakiil Dhaqaale Magacaabay